ချိတ်​ဆက်​ Website မှာ အသုံးပြုသူ​တွေ ပိုအဆင်​​ပြေ​စေဖို့ ​အောက်​ပါ နည်​းပညာအ​ပြောင်​းအလဲ​တွေ ထပ်​လုပ်​​ပေးထားပါတယ်​။ ၁။ Search Box on Project Dashboard (for employers and freel...
အတွေ့ကြုံရင့်သော အလွတ်တန်းပညာရှင်တွေကို ဘယ်လိုရှာဖ...
အခုဆို စီးပွားရေးလုပ်ငန်း အများစုဟာ အလွတ်တန်းပညာရှင်တွေနဲ့အတူ လက်တွဲပြီး အလုပ်လုပ် နေကြပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ စာရေးဆရာ၊ ဂရပ်ဖစ် ဒီဇိုင်နာ၊ ပရောဂျက် မန်နေဂျာ၊ ပရိုဂရမ်မာ စသဖြင့် အလွတ်တန်းပညာတွေကို မိမိလုပ်ငန်...
အလွတ်တန်းပညာရှင်တွေကို ငှားရမ်းခြင်း နှင့် ဆက်ဆံနည...
ယေဘုယျအားဖြင့် ကုမ္ပဏီတော်တော်များများက သမားရိုးကျ နည်းလမ်းတွေနဲ့ပဲ အသားကျနေတဲ့အတွက် အလွတ်တန်းပညာရှင်တွေကို ငှားရမ်းအသုံးပြုဖို့ကို တွန့်ဆုတ်နေတတ်ကြပါတယ်။ အကယ်၍ သင့်အနေနဲ့ သမားရိုးကျနည်းလမ်းတွေက ခွဲထွ...
သင်​့လုပ်​ငန်​းနဲ့ပတ်​သတ်​ပြီး အထူးကျွမ်​းကျင်​သူတစ်​​ယောက်​ လိုအပ်​​နေပါသလား? သို့မဟုတ်​ အလွတ်​တန်​းပညာရှင်​များနှင်​့ အလုပ်​လုပ်​ဖို့ စဉ်​းစားနေပြီလား? အပြိုင်အဆိုင်တွေများတဲ့ ဒီကနေ့ခေတ်မှာ သူမ...
သင့်ရဲ့ အလွတ်တန်းပညာရှင်များနှင့် ယုံကြည်မှုတည်ဆော...
အရာရာတိုင်းမှာ အပြန်အလှန်ယုံကြည်မှု ရှိခြင်းဟာ ကောင်းမွန်တဲ့ လက္ခဏာတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို အပြန်အလှန် ယုံကြည်လေးစားမှုရှိခြင်းဟာ ရှေ့ဆက်မယ့် အနာဂတ်ခရီးအတွက် ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ အခွင့်အလမ်းတွေကို သယ်ဆေ...
အလွတ်တန်းပညာရှင်တွေကို စီမံခန့်ခွဲခြင်းဟာ အချိန်ပြည့်၀န်ထမ်းတွေကို စီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့် မတူပါဘူး။ ပုံမှန်အားဖြင့် အလွတ်တန်းပညာရှင်တွေဟာ သင့်ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာ ရှိမနေတတ်သလို သူတို့ကို အချိန်ပြည့...